Nhoroondo Pfupi yeU.S. Federal Income Tax
Matambudziko Imwe Mitero uye IRS
Mari inokwidzwa kuburikidza nemutero wemari inoshandiswa kubhadhara mapurogiramu, zvikomborero nemabasa anopiwa nehurumende yeUnited States kuitira kubatsira kwevanhu. Zvinhu zvinokosha zvakadai sekuchengetedzwa kwenyika, kuchengetedzwa kwezvokudya zvekudya , uye mapurogiramu ezvebatsiro ehurumende zvinosanganisira Social Security neMedare hazvikwanise kuve pasina mari yakasimwa nehurumende yemutero wemutero. Kunyange zvazvo mutero wemutero wehurumende usina kuva wakasimba kusvika muna 1913, mitero, mune imwe nzira, yave iri chikamu chenhau yeAmerica kubvira pamazuva edu ekutanga seve nyika.
Kuchinja kweMutero Mutero muAmerica
Kunyange zvazvo mitero inobhadharwa neAmerican colonist kuGreat Britain yaiva chimwe chezvikonzero zvikuru zveChishopiti cheUndendeni uye pakupedzisira Hurumende yeAmerica , America's Founding Fathers vaiziva kuti nyika yedu duku ichada mitero yezvinhu zvakakosha semigwagwa uye kunyanya kudzivirira. Kupa urongwa hwekuteresa, vaisanganisira nzira dzekugadza kwemitemo yemitero muMutemo. Pasi Pechikamu I, Chikamu 7 cheMutemo, mabhiriro ose anotarisana nemari uye mitero inofanira kutanga muImba yeVamiririri . Kana zvisina kudaro, vanotevedzera nzira imwe chete yemutemo sezvimwe zvikwereti.
Asati asvika pakupedzisira kugadziriswa kweMutemo-soro muna 1788, hurumende yehurumende yakanga isina simba rakananga rokutora mari. Pasi peNyaya dzeChishanu, mari yekubhadhara chikwereti chenyika yakabhadharwa nehurumende muhuwandu hwehupfumi hwavo uye pakuziva kwavo.
Chimwe chezvinangwa zveMutemo weConstitutional Convention ndechekuita kuti hurumende yehurumende ive nesimba rekubhadhara mitero.
Kubva Ratification yeMutemo
Kunyangwe mushure mekugadzwa kweBumbiro reMitemo, hurumende yakawanda yehurumende yakabhadharwa yakagadzirwa kuburikidza nemitengo - mitero kune zvigadzirwa zvekutengeswa - uye mitero yemitengo - mitero pakutengeswa kana kushandiswa kwezvinhu zvakasiyana-siyana kana kutengesa.
Kubhadhara mitero kwaifungidzirwa se "regressive" mitsero nekuti vanhu vane mari shoma vaifanira kubhadhara chikamu chepamusoro chemari yavo kunze kwevanhu vane mari yakawanda. Nzvimbo dzakanyanya kuzivikanwa dzematare emadhora dziripo nhasi zvinosanganisira izvo zvakawedzerwa kune zvekutengesa motokari, fodya nedoro. Kunewo mitero yemafambisi pamabasa, zvakadai sekubhejera, kuchenesa kana kushandiswa kwemigwagwa nemabhizimisi emabhizimisi.
Mitero yePakutanga Imari Yakasvika uye Yakaenda
Munguva yeHondo Yenyika kubva muna 1861 kusvika muna 1865, hurumende yakaona kuti mitero uye mitero yekutengeserana yega yega yaisagona kuunza mari yakakwana yekuti vose vashandise hurumende uye kuitisa hondo yeChitteracy. Muna 1862, Congress yakagadzira mutero wemari shoma chete kune vanhu vakaita mari inodarika madhora 600, asi vakaiparadza muna 1872 vachida mitero yakakwirira yefodya newaini. Congress yakaisa zvakare mutero wekuwana mu1894, chete kuti ive neDare Repamusorosoro ichitaura kuti haibvumirano nemitemo muna 1895.
16th Amendment mberi
Muna 1913, neHondo Yenyika I iri kusvika, kubvumidzwa kwe 16th Amendment kwakagadzwa zvachose mutero wemari. Chigadziriswa chakapa Congress simba rokumanikidza mutero pamari yawanikwa nevanhu vaviri uye makambani. Pakazosvika 1918, hurumende yakabhadharwa yakabhadharwa mutero wemari yakabhadharwa yakadarika $ 1 bhiriyoni kwekutanga, uye yakakonzera $ 5 bhiriyoni muna 1920.
Kubudiswa kwemvumo yekuregeresa mutero kune mubhadharo wevashandi muna 1943 kuwedzera mitero yemari inosvika madhora 45 mabhiriyoni muna 1945. Muna 2010, IRS yakaunganidza inenge madhora 1.2 triliyoni nemutero wemari kune vamwe uye imwe $ 226 mabhiriyoni kubva kumakambani.
Basa reCongress in Taxation
Maererano neUnited States Treasury Department, chinangwa cheCongress pakugadzirisa mitemo yakabhadhara mitero ndechokuenzanisa kukosha kwekuwana mari, kuda kuve kwakanaka kune vateresi, nekuda kufambisa nzira iyo vateresi vanoponesa uye vanopedza mari yavo.
Mitero Yemitero Haigoni Kununurwa KuBhokisi Rako reMexico Pasinei
US States Iine Chero Rehu Rega Mutero
Iko 'Mutero Wakanaka' mune ramangwana reAmerica?
Nzira Yokuwana Sei Mapepa Kana Zvinyorwa Zvese Yako IRS Mutero Kunodzoka
Ndiani Anotarisa Mitero Yose?
Pamusoro mazano mashanu ekutora mari yako yekubhadhara mitero nokukurumidza
Ko Vanopinda Munyika Vasina Mhosva Vanobhadhara Mitero?
Vanhu veAmerica Vanonzwa Sei NezvePfuma Kudzosera?
Nzvimbo yaHillary Clinton paMitero uye kuMiddle Class
US Tax Government Gasoline Tax Kubva muna 1933
Mashandisiro Aungaita IRS Taxpayer Advocate Service kuti Uwane Rubatsiro
Nzira Yemaziso Edziso Makumbo - Percy Shaw
Saturn mu Fourth House
Maitiro Ezvo 36 System Handicap Formula Inoshanda muGorofu
White House muWashington DC
Northern Kentucky University Admissions
Chii Chinofanira Kudavira Kuti Baba Vabereki Vanoitira Vana Vvo?
Smart Ideas for Fantasy Baseball League Names
Antifreeze: Dzvuku kana Green?
Anineini Inofunga Kuita Zvepabonde Kunobata Zviri nani Here?
A Tarisa Shingle Style Architecture
Zvimwe Zvikonzero Zvokutsigira Gay Kuroorana uye Rwisana neGreen Marriage Chirongwa
Nzira Yokusarudza Chimbo cheMhanzi Chokutamba
Nzira Yekutamba Sei Bisque Golf Game
Kurarama Past 90 muAmerica kwete NoMakore paGungwa
The Best Samurai Anime Series uye Mafirimu
Bhodhi Cheer uye Chants
Ulysses S Bvuma Zvinhu Zvishoma
Kuumba nekushandisa Rubrics
Nhoroondo ye JukeBox
Kufamba MuJasmine Garden
Cash Is King Pakutengesa Motokari Inoshandiswa